Fitsangatsanganana yoga " Journey-Assist - Ny toerana tsara indrindra ho an'ny yoga. Yoga amin'izao tontolo izao.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » ny yoga
Ny toerana malaza indrindra amin'ny fitsidihana yoga.
Ny tanjon'ny fitsidihana yoga rehetra dia ny fandalinana ny filozofia yoga sy ny fampiharana azy. Noho izany, voafidy ireo toerana ireo izay misy habakabaka mifanaraka aminy. Matetika dia ny faritra atsimo-atsinanana any Azia. Ny fitsangatsanganana toy izany dia tanterahana haingana indrindra, noho io antony io dia nokarakaraina ny fitsangatsanganana any amin'ireo toerana tsy dia mpizaha tany intsony ary mety hisy ny tsy fahitana raha toa ny tontolo be tabataba. Ireo dia ranomasina sy morontsiraka, tendrombohitra, ala.
Mandritra ny fitsangatsanganana, ny fotoana ambony indrindra dia natokana ho an'ny yoga, fisaintsainana, fanatsarana ny fahasalamana, fanorana ary fandroana amin'ny fitoerambe voajanahary, fandroana no ampiharina. Ny ampahany amin'ny fotoana dia natokana hitsidihana ireo tempoly bodista, fitsangantsanganana an-tendrombohitra, lahateny nataon'ireo mpanao yoga malaza. Ny fitsangatsanganana yoga dia azo ifantohana tery, ohatra, ampidiro ny fampiharana karazana yoga manokana - Kundalini, Hatha, sns. Manokana Ny fitsidihana yoga ho an'ny fatiantoka.
Endrika iray amin'ny fitsidihan'ny yoga dia ny fisian'ny fandaharan'asa, ankoatry ny serivisy mahazatra (trano fandraisam-bahiny, sidina, sakafo), ary koa ny fitsipi-pivoarana angovo, ny tanjon'ny hery ara-panahy sy ara-batana. Ny ampahany betsaka amin'ny ora fitsangatsanganana manontolo (2-7 ora isan'andro) dia lany amin'ny fampiharana yoga sy ny fampahafantarana ny mety ho vatan'ny tena eo amin'ireo olona mitovy saina. Ny fialan-tsasatra tahaka izany dia tsara indrindra ho an'ny rehetra izay manatsara ny haavon'ny angovo, mijery ny laharam-pahamehany amin'ny fiainany amin'ny zoro hafa, miala amin'ny miroborobo amin'ny tanàna lehibe mba hankafizany ny natiora. Amin'ny faran'ny fitsaharana, ny hery very dia naverina amin'ny laoniny.
Ny fitsangatsanganana yoga avy amin'ny fizahan-tany hafa dia misy fahasamihafana manaraka ireto:
Hetsika - Ny yoga dia dinihina sy ampiharina mandritra ny andro fitsaharana.
Ny rivo-piainana manokana an'ny yoga.
Fitsaharana - mandritra ity dia ataonao ity dia afaka miala sasatra tanteraka ny vatanao sy ny fanahinao.
Fivoarana anaty - fitsidihana toy izany dia ahafahanao manova tanteraka ny fomba fijerinao izao tontolo izao.
Fahasalamana - noho ny asanas, fisaintsainana ary tontolo iainana mahomby dia vita ny fanarenana tanteraka.
Ny fitazonana sakafo mahasalama
Sakafo mahasalama mety.
Ny tolotra sy fandaharana isan-karazany no ahafahana misafidy fitsangatsanganana ho an'ny kitapo misy.
Ny vidin'ny fitsidihana toy izany ao amin'i Russia (ny toerana lehibe dia ny faritra Moskoa, Sochi, Tuapse ary Altai) dia eo amin'ny 250 ... 650 $.
Ny fitsangatsanganana yoga faran'ny herinandro dia mety mitentina any amin'ny $ 125 -150 eo ho eo.
Any Ukraine, ny fivahinianana toy izany koa dia atao ao amin'ny Carpathians sy Crimea.
Any Belarus, fitsangatsanganana yoga faran'ny herinandro any amin'ny faritr'i Minsk (Manor VODAR), ary eny amin'ny zaridainan'ny natiora eny amoron-dranon'i Bobruisk.
Ny saran'ny fitsidihana yoga any ivelany (firenena lehibe - Montenegro, Torkia, India, Thailand, Sipra, Vietnam, Sri Lanka) dia eo amin'ny 1200 $ ka hatramin'ny $ 2000 eo ho eo. Ary miankina amin'ny haren'ny programa, sy ny faharetany.
Ho an'ireo mpankafy fialan-tsasatra amin'ny sokajy "All inclusive", asehonay ho anao ny mpamory ny fikarohana fitsangatsanganana yoga eran-tany Bookyogaretreats.
Raha mitady fomba hahatratrarana firindrana ianao, amboary ny fanombohanao ara-panahy ary ampidiro ao anaty firaisana amin'ny vatana ara-batana, dia angamba ny fitsidihan'ny yoga no fitaovana tsara indrindra amin'ity!
FIVAVAHANA HO ANY
Ny toerana malaza indrindra amin'ny fitsidihana yoga
Bali no iray amin'ny toerana itadiavana indrindra amin'ity indostrian'ny fizahantany ity. Ity nosy Ranomasimbe Indianina ity dia manana toetra maha-virjiny sy toetrandro mafana. Misy ny fepetra mety amin'ny fisaintsainana, ny fitambarana amin'ny natiora, ny fandriam-pahalemana tanteraka: ny endrika mahafinaritra, ny riandrano, ny zavamaniry ivelany, ny biby hafahafa, ny mponina mieritreritra tsara. Misy volkano ihany koa ao amin'ilay nosy, izay avy eo an-tampon'ilay panoramas tsy mampino misokatra, ary afaka mihaona amin'ny fiposahan'ny masoandro ianao.
Mazava ho azy, misy toerana maro izay mamela anao hiresaka tsara amin'ny yoga. Ity dia Rishikesh, Goa, Kerala. Ny yoga eto amin'ity firenena ity dia ampian'ny mponina maro be. Noho izany antony izany, dia ho vitanao io any India na aiza na aiza, tsy hahagaga azy ny olona. Ny rivotra iainana ao amin'ity firenena ity dia noforonina tamin'ny feon'ny mozika, ny fofon'ny emboka manitra ary ny fihirana ny mantra. Eto ianao dia afaka mahita ny haben'ny tsangambato tsy manam-paharoa manokana.
Ity nosy Ranomasimbe Indianina ity dia afaka mirehareha amin'ny lova ara-kolontsaina manan-karena - ny maritrano, ny tontolon'ny tany madio, ny ala mikitroka, ny zaridaina paradisa, ny morontsiraka azure, ny fambolena dite mahafinaritra be dia be. Ny fomba fiainan'ny mponina eto dia miadana, milamina, saika misaintsaina, izay, arak'izay azo atao, dia mifanaraka amin'ny fahatsapana ny filàna ao anaty fitsangatsanganana yoga.
Fanjakana kely eo anelanelan'ny Sina sy India. Ny mampiavaka azy dia eo amin'ny toerany eo amin'ny tehezan'i Himalaya. Eto ianao dia afaka mankafy tsy misy farany ny pagoda, ny lapa, ny tempoly eo afovoan'ny tampon-tampon'ny lanezy. Rivotra mahatalanjona, madio, mangarahara. Miely patrana ny Buddhism sy ny Hindoisma. Ny atmosfera dia tsara indrindra ho an'ny fampiharana ara-panahy sy ny fahalalana ny tena.
Paradisa eo an-tsisin'ny tany. Eto, azo atao ny manokan-tena avy amin'ny fiandrasana, fanoloran-tena amin'ny fisaintsainana, fampifangaroana amin'ny bibidia. Afaka mahazo fahafinaretana marina amin'ny fijanonana mahafinaritra ianao. Toerana mety hitoerana fialan-tsasatra sy yoga mahafinaritra any Maldives dia azo raisina ho nosy toa an'i Kamadu, Fulado, Daravanda.
Nosy Praslin Seychelles
Praslin Island (Seychelles) dia tokan-tena tsy manam-paharoa izay manambatra ny tombotsoan'ny toerana misy azy amin'ny traikefa yoga tsy manam-paharoa. Ireo mpampianatra yoga efa za-draharaha dia miasa eto mba hanampy amin'ny fampivoarana ny fahafaha-mandanjalanja, ny fifandanjana ary ny tanjaka. Mandritra ny fiatoana eo anelanelan'ny fotoam-pianarana dia azonao atao ny mieritreritra fiposahan'ny masoandro sy fiposahan'ny masoandro eny amin'ny morontsiraka tropikaly.
Chiva Som (Thailand) - toeram-pivarotana iray izay heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fahaizana ny kanton'ny yoga (indrindra indrindra, io no toeram-pivarotana ankafizin'ny masoivoho yoga iraisam-pirenena Lea Kim). Tazonina tsy tapaka eto ny kilasy - tsirairay sy amin'ny vondrona. Eto ianao dia hatomboka amin'ny fitsipiky ny fialan-tsasatra, ao anatin'izany ny fisaintsainana, ary hahay ny teknika lehibe amin'ny "fanadiovana" ny aura ianao, ao anatin'izany ny fampiasana fomba samy hafa - Vinyasa, Hatha, Iyengar, Ashtanga. Mampiasa programa manokana ny mpampianatra, manome fiampangana fihetseham-po tsara izay maharitra mandritra ny fotoana maharitra. Ny fitsaboana dia misy fanorana, aromatherapy ary fitsaboana rano.
Valencia Ranch, Kalifornia atsimo, United States
Rancho Valencia dia iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny malaza indrindra any atsimon'i California, any Rancho Santa Fe. Izy io dia faritra mitokana voahodidin'ny zaridaina maitso. Ny talen'ny resort dia Katie Brower. Izy dia mpampianatra yoga manana fankasitrahana sy fahefana manerantany. Mandritra ny fampianarana isan-kerinandro dia misy ny fampianarana, izay atambatra amin'ny fitsangatsanganana. Ny vahiny dia mandray any amin'ny efitrano kely faran'izay tsara. Omena sakafo manokana ihany koa, izay kasaina hatao anio ary manampy amin'ny fanesorana poizina amin'ny vatana.
Bahamas. Ny fiadanan-tsaina sy ny gadona milamina amin'ny fiainana no tombony ahazoan'ny mpankafy yoga manerana izao tontolo izao. Azo atao ny mijanona ao anaty lay na ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mirentirenty miaraka amin'ny fahitana ny ranomasina. Misy ny fepetra ilaina rehetra amin'ny fampiharana karazana yoga.
Maya Tulum, Meksika
Maya Tulum, Mexico. Fihemorana yoga. Rehefa vita ny fanazaran-tenanao yoga maraina dia afaka mitsidika an'i Tulum ianao, ilay tanàna Maya Maya. Mety ho an'ireo tia yoga izay miezaka manadio ny vatana sy ny fanahy, saingy tsy vonona hiaritra ny fitsitsiana. Ankoatry ny fisaintsainana dia manome fitsaboana spa, ranom-boankazo ary trano misaraka amoron-dranomasina izy.